Òkè ndị nchụàjà na ndị Livaị (1-8)
Ime mgbaasị adịghị mma (9-14)
Onye amụma nke dị ka Mosis (15-19)
Otú e si amata ndị amụma ụgha (20-22)
18 “Ndị nchụàjà bụ́ ndị Livaị na ndị niile si n’ebo Livaị agaghị eketa òkè ma ọ bụ ala n’Izrel. Ha ga na-eri àjà Jehova ndị a na-esu ọkụ, nke bụ́ ihe o ketara.+ 2 N’ihi ya, ha agaghị eso ụmụnne ha keta ihe ọ bụla. Ọ bụ Jehova ka ha ketara, otú ọ gwara ha. 3 “Ihe ndị a ga-abụ ihe ruuru ndị nchụàjà n’ihe ndị mmadụ ga na-eweta: Onye ọ bụla chụrụ àjà, ma ọ̀ bụ ehi ma ọ̀ bụ atụrụ ka ọ chụrụ, ga-enye onye nchụàjà ubu ya, agba ya, na afọ ya. 4 Unu ga-enye ya ọka* mbụ unu, mmanya ọhụrụ mbụ unu, mmanụ mbụ unu, nakwa ajị anụ mbụ a kpachapụtara n’ìgwè ewu na atụrụ unu.+ 5 Jehova bụ́ Chineke unu ahọrọla Livaị na ụmụ ya ndị nwoke n’ebo unu niile ka ha na-eje ozi n’aha Jehova mgbe niile.+ 6 “Ma, ọ bụrụ na onye Livaị ahapụ ebe o bi n’otu n’ime obodo unu n’Izrel,+ chọọ* ịga n’ebe Jehova họọrọ,*+ 7 o nwere ike ije ozi n’ebe ahụ n’aha Jehova bụ́ Chineke ya otú ụmụnne ya niile, bụ́ ndị Livaị, ndị na-eje ozi n’ebe ahụ n’ihu Jehova, na-eme.+ 8 Ihe oriri ọ ga na-eketa ga-aha ka nke ha na-eketa,+ ma e wepụ ihe o nwetara ná ngwongwo nna nna ya hà o rere. 9 “Mgbe unu banyere n’ala ahụ Jehova bụ́ Chineke unu na-enye unu, unu amụtala ime arụ mba ndị ahụ na-eme.+ 10 E kwesịghị inwe onye ọ bụla n’ime unu nke na-akpọ nwa ya nwoke ma ọ bụ nwa ya nwaanyị ọkụ iji chụọ àjà,+ onye ọ bụla nke na-agba afa,+ onye ọ bụla nke na-eme anwansi,*+ onye ọ bụla nke na-agba afa ka ọ mata ihe ga-eme n’ọdịnihu,+ dibịa anwansi,+ 11 onye ọ bụla nke na-akọ ndị ọzọ ọgwụ, onye ọ bụla nke na-ajụ onye na-agba afa+ ma ọ bụ onye na-akọ ihe ga-eme n’ọdịnihu+ ase, ma ọ bụ onye ọ bụla nke na-ajụ ndị nwụrụ anwụ ase.+ 12 N’ihi na Jehova kpọrọ onye ọ bụla na-eme ihe ndị a asị. Ọ bụkwa n’ihi arụ ndị a ka Jehova bụ́ Chineke unu ji na-achụpụrụ unu mba ndị ahụ. 13 Unu ga-egosi na unu bụ ndị na-enweghị ihe a ga-eji taa ha ụta n’ihu Jehova bụ́ Chineke unu.+ 14 “N’ihi na mba ndị a unu na-anapụ ala ha na-ege ndị na-eme anwansi*+ na ndị na-agba afa+ ntị. Ma, Jehova bụ́ Chineke unu achọghị ka unu mee ụdị ihe a. 15 Jehova bụ́ Chineke unu ga-esi n’ụmụnne unu họpụtara unu onye amụma nke dị ka m. Geenụ ya ntị.+ 16 Ọ bụ maka na unu rịọrọ Jehova bụ́ Chineke unu na Horeb n’ụbọchị unu zukọtara,+ sị, ‘Ka anyị ghara ịnụ olu Jehova bụ́ Chineke anyị ọzọ, ka anyị gharakwa ịhụ nnukwu ọkụ a ọzọ, ka anyị ghara ịnwụ.’+ 17 Jehova sịziri m, ‘Ihe ha kwuru dị mma. 18 M ga-esi n’ụmụnne ha họpụtara ha onye amụma nke dị ka gị.+ M ga-agwa ya ihe ọ ga-ekwu,+ ọ ga-agwakwa ha ihe niile m ga-enye ya n’iwu.+ 19 N’eziokwu, m ga-eme ka onye na-egeghị ntị n’okwu m ndị ọ ga-ekwu n’aha m zaa ajụjụ.+ 20 “‘Ọ bụrụ na mpako emee ka onye amụma ọ bụla jiri aha m kwuo ihe m na-enyeghị ya iwu ka o kwuo ma ọ bụ jiri aha chi ọzọ kwuo okwu, onye amụma ahụ ga-anwụ.+ 21 Ma, unu nwere ike ikwu n’obi unu, sị: “Olee otú anyị ga-esi amata na ọ bụghị Jehova kwuru okwu ahụ?” 22 Ọ bụrụ na onye amụma ahụ ji aha Jehova kwuo okwu, ma ihe o kwuru emezughị, ọ bụghị Jehova kwuru okwu ahụ. Ọ bụ mpako mere onye amụma ahụ ji kwuo ya. Unu atụla ya ụjọ.’
^ Ma ọ bụ “mkpụrụ obi ya achọọ.”
^ Ya bụ, n’ebe Jehova họọrọ ka ọ bụrụ ebe ndị mmadụ ga-abịa na-efe ya.